सीमा सुरक्षामा मुख्य चुनौती ::Nepali TV
You are here : Home News सीमा सुरक्षामा मुख्य चुनौती
सीमा सुरक्षामा मुख्य चुनौती
निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई सोधेका थिए, ‘दैनिक विस्फोट गराउने बम कहाँबाट आइरहेको छ ? अर्यालले सहजै जफाव दिए, ‘खुला सिमाना छ हजुर । उतै (भारत) बाट आएका हुन् ।' मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच भएको यो संवादले बम बनाउने गोलाबारुद छिमेकी मुलुक भारतबाट आएको कुरामा दुईमत छैन । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको जवाफपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले ‘सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी के हेरेर बसेका छन् ? ' भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठले सीमामा रहेका सीमा सुरक्षा पोस्टभन्दा अलग बाटो भएर विस्फोटक पदार्थ भित्रिएको रिपोर्टिङ गरे । बम पहाडी क्षेत्रमा पड्किएपछि बम बनाउने कच्चा पदार्थ तराइका जिल्ला हुँदै पहाडमा स्टोर गरेर राखेको अर्याल र सिंहले देउवालाई दर्शाए । सीमा सुरक्षाको ड्युटी सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ । सीमा नजिक नेपाल प्रहरीका इकाइ र वडा प्रहरी कार्यालय पनि नभएका होइनन् । तर, सुरक्षा निकायलाई छलेर विस्फोटक पदार्थ भित्रिएको दाबी सुरक्षा निकायको छ ।
अहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव'ले मात्रै बम पड्काएको सूचना बाहिर आए पनि अब विप्लवभन्दा बाहिर रहेका अन्य तत्वमाथि पनि निगरानी राख्न प्रहरीले सुरु गरेको छ । शनिबार रौतहटको चन्द्रपुरमा भएको बम विस्फोट घटना विप्लव नभई अन्य समूहले गराएको निष्कर्ष प्रहरीको छ । प्रहरीको विश्लेषणमा रौतहट विप्लवको पकड क्षेत्र मानिँदैन ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आइतबारबाट सीमा केन्द्रित सुरक्षामा जोड दिन सुरु गरेका छन् । प्रहरी प्रमुख अर्यालले भने, ‘सीमा केन्द्रित सुरक्षामा जोड दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छु ।' चुनाव भाड्ने वा हुन नदिने पार्टी वा समूहले विस्फोटका घटना गराउँदै आएको अर्यालको भनाइ छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ